“စုံတွဲ”ပရိုမိုးရှင်း 🥰 Acer ရဲ့ Branded Desktop သုံးမလား? ဒါမှမဟုတ် 🤔 – unique.com.mm
“စုံတွဲ”ပရိုမိုးရှင်း 🥰 Acer ရဲ့ Branded Desktop သုံးမလား? ဒါမှမဟုတ် 🤔 Acer All in One ကိုရွေးမလား 🤔
ဘာဝယ်ဝယ် Acer Monitor နဲ့တွဲဖက်ဝယ်ယူရင်း ၂၅ ဒေါ်လာ ပြန်ရမယ့် “Bundle Offer” ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်လေးကို ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါပြီ 🥰
ပရိုမိုးရှင်းကာလကတော့ မေလ (၇) ရက်နေ့မှ (၃၁) ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။
ဝယ်ယူနိုင်မည့် အမျိုးအစားများကတော့ 👇
❤️ Acer Aspire C24-1650 (All in One) [Intel Core i5-1135G7, 8GB DDR4 Memory, 1TB HDD, 23.8” FHD IPS Monitor, USB Keyboard + Mouse, Internal Speaker] ---> 719$
❤️ Acer Aspire C24-1650 (All in One) [Intel Core i5-1135G7, 8GB DDR4 Memory, 512GB SSD, 23.8” FHD IPS Monitor, Wireless Keyboard, Optical Mouse, Internal Speaker] ---> 819$
❤️ Acer Aspire XC-895G [Intel Core i3-10100, 4GB DDR4 Memory, 1TB HDD, NVIDIA GeForce GT730 2GB, DVD Rewritable Drive, USB Keyboard, USB Optical Mouse] ---> 499$
❤️ Acer Aspire XC-895 [Intel Core i7-10700, 4GB DDR4 Memory, 1TB HDD, DVD Rewritable Drive, USB Keyboard, USB Optical Mouse] ---> 689$
❤️ Acer Aspire XC-895G [Intel Core i7-10700, 4GB DDR4 Memory, 1TB HDD, NVIDIA GeForce GT1030 2GB, DVD Rewritable Drive, USB Keyboard, USB Optical Mouse] ---> 779$
အရေအတွက် အကန့်အသတ်နဲ့ ရောင်းချသွားမှာဖြစ်လို့ အမြန်ဆုံးအရောက် လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်...